China Log splitter vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Zvimiro zveedu koni danda rinotsemura
KINGER koni danda mahwanda ine mapfumbamwe emamodeli kubva kuYDH12 kusvika kuYDH250, inoenderana ne2-30ton excavator, skid steer uye backhoe loader nezvimwe.
Kumusoro kuomesa kwakakosha kurapwa ne screw koni zvinoreva kuti icharatidza kuomarara uye kupinza kuita panguva yekutema matanda.
KINGER cone danda rinotsemura masango inochinjika kuti iiswe pane chekuchera, skid steer, backhoe loader nezvimwewo yakachengeteka kupfuura ruoko rweganda rinotsemuka senguva dzose.Iine yakakwira inoshanda yekutema matanda, KINGER koni goko mahwanda anozivikanwa kwazvo nevatengi.
Zvemasango anotsemura huni / matanda / huni nezvimwe nenzira yakachengeteka uye inokurumidza.
Main Export Musika
Yedu koni danda mahwanda emasango inogamuchirwa zvakanaka kune vatengesi kuGerman, UK, USA, New Zealand etc.
Pamusoro penyaya ndeye yedu koni danda mahwanda marongero eako mareferensi Tinogona kuenzanisa yakakodzera modhi zvinoenderana neyako excavator / skid steer / backhoe loader uremu.
Pashure: Vakaona musoro
Zvadaro: Chigumburu kuronga